Zombies Goes Up dia manana zombie maro ary fanaovana dokambarotra | Androidsis
Zombies mandeha miakatra dia fialamboly tsy ankanavaka notafihan'ny dokam-barotra ratsy
Zombies Goes Up dia fiankinan-doha mahazatra izay manome antsika ohatra tsara maninona raha atao rehefa mandefa lalao amin'ny Android isika ary te-hanana azy io amin'ny dokam-barotra. Andao lazaina fa efa hiala eo isika, fa hanararaotra azy kosa.
Manomboka ny lalao ianao rehefa avy nilalao azy omaly, milalao lalao, tapaho ny lohanao ary manaova doka Ny doka 30-segondra dia halefa mivantana any amin'ny fako. Ary efa imbetsaka ny fotoana nanerenany antsika hanao an'io, satria na fohy na kamo amin'ny fahafatesana manaraka, 15 segondra hafa. Ataovy…
1 Doka dokambarotra, voaozona io
2 Ampiasao ny "checkpoints" ao amin'ny Zombies Goes Up
3 Kanto niasa tamin'ny pixel
Doka dokambarotra, voaozona io
Lalao izay manana a pint lehibe amin'ny fanatanterahana teknika ary ilay iray amin'ilay filalaovana, na dia tsy mamela ny hafa handika aza izy io, mety hahatonga antsika hifanaraka amin'izany filalaovana izany sy ny kanto pixel, fa afaka mankahala azy isika ao anatin'ny segondra vitsy saika rehefa ihomehezan'izy ireo izahay.
Ary jereo hoe iza izahay efa zatra mahita doka mba hisaorana ny mpamorona. Ny zavatra azo antoka indrindra hataontsika amin'ny Zombies dia miakatra, fa ny tsy avelany hifoka rivotra akory hieritreritra raha tena miatrika dokambarotra isika, ary lalao iray no sendra izany.
Satria azo atao izany. Mifantoka amin'ny "lalao", ny tanjontsika dia ny hampiakatra ny zombie mahantra amin'ny faran'ny sehatra amin'ny alàlan'ny heverina fa "handavaka" miaraka amin'ny nifiny. ny eny an-dalana dia tsy maintsy hiatrika bibikely isan-karazany ianao ary ireo mekanika sarotra indraindray.
Ampiasao ny "checkpoints" ao amin'ny Zombies Goes Up
Toy ny haavony tanana izy ireoAo amin'ny Zombies Goes Up dia mila mampiasa ny toeram-pisavana isika na mamonjy teboka hiverenana amin'izy ireo ary manandrana miala amin'ny lalana miaraka amin'ireo hetsika efa namboarina tamin'ny alàlan'ny voangory sasany.
Ny tanjontsika koa dia ny mandeha manangona ny taolana rehetra Azontsika atao ny miakatra amin'ny tany mba hiakatra ambonin'ny tany. Ary izany dia mahazatra an'io tsy fitoviana amin'ny zombies io, izay farafaharatsiny, ny ambaratonga tsirairay dia niasa tamin'ny tanana; azo antoka fa io no fialantsiny nomena antsika hanery antsika hahita dokambarotra be loatra ka hamela vahaolana roa fotsiny izy ireo ho antsika.
Eny, ny iray manala azy ary ny iray mandoa vola hanala doka; Angamba ity safidy farany ity raha tsy saro-kenatra tamin'ireny dokam-barotra noterena 30 segondra ireny izy ireo, fa andao, efa fantatrao hoe iza aminay no hitifirantsika.
Kanto niasa tamin'ny pixel
Inona Eny, tianay ny lalao sy ny fomba fahita ampiasaina. Nasongadinay fa ny ambaratonga sy ireo tahiry mandeha ho azy izay avy amin'ny perla dia natao ho an'ny tanana mba hahafahana mameno ny haavony, satria raha tsy izany dia ho sarotra kokoa noho ny fahasarotana izay miseho indraindray amin'ity lalao ity.
hita maso manana kanto pixel tsara Miaraka amin'io volavolan'ny protagonista io, ny ambaratonga sy ireo fahavalo tokony hianarantsika ny fihetsik'izy ireo mba hialana amin'ny fandalovany. Tsy ratsy izany raha toa ka nandefa kinova premium ho an'ny euro iray ry zareo mba tsy handehanantsika izany traikefa sarotra omen'ny dokam-barotra izany. Ohatra iray amin'ny fomba mety hahafaty azy ny maty isaky ny mitelina tsirairay.
Zombies Goes Up dia kilalao mahazatra raisina a fotoana fohy ary noho izany miezaha haka ny zombie-tsika hahatratra ny hazavana ary hanao ny zavatra. Anjaranao izao ny manapa-kevitra raha toa ka mendrika ny mitelina dokambarotra be loatra. Raha mila zombie bebe kokoa ianao Hihaona aminao izahay miaraka amin'ny Zombie Derby.
Mety ho kivy be ny dokam-barotra rehefa afaka manantona antsika ny lalao.
Ny volavolan'ny protagonista sy ny tontolo iainana
Ireo singa marobe amin'ny famoronana ny ambaratonga
Mijaly ianao amin'ny dokambarotra
Miakatra ny Zombie
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Zombies mandeha miakatra dia fialamboly tsy ankanavaka notafihan'ny dokam-barotra ratsy
Ny fanavaozana voalohany ny OnePlus 8T dia misy fanatsarana lehibe, ary koa ny endri-javatra Canvas.
[APK] Azonao atao izao ny misintona ny Google Camera 8.0 amin'ny Pixel 5 amin'ny Pixel hafa